ရထားခရီးသွားဆွီဒင်မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဆွီဒင်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပ, ဘုန်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ၏လှပသောမြေယာခြောတစ်သွားလာရင်းမှဦးတည်ရာရှိအထဲကစိတ်အားထက်သန်တိုင်းခရီးသွားဘို့ဖြစ်၏. အဆမဲ့ကွောကျရှံ့အလည်အပတ်ခရီးနေရာနိုးထမှုနှင့်အတူ, ဥရောပသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်လှပသောနိုင်ငံရပ်ခြား၌သင်ကြားရေးအချက်အချာဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ မြေအောက်ရထားဘူတာများတွင်မြေအောက်အနုပညာကိုလူသစ်ပြတိုက်ဖြစ်ဟန်. သူတို့ကအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းနိူးများအတွက်အသစ်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်နေရာများဖြစ်လာကြပြီ. သူကားအဘယ်သူထင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်? အများဆုံးဖှယျအများပြည်သူနေရာများ၏အချို့, အကြီးစားအနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ 2018 တစ်ခုအဆုံးမှာနီးပါးဖြစ်ပါသည်, သာခရစ်စမတ်နီးသည်ကိုဆိုလိုနိုငျသော! ပြည်သူ့နေဆဲထိုသို့အဆင်သင့်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ခရီးသွားများအတွက်, ခရီးစဉ်စီစဉ်မှမြင့်မားသောအချိန်ကန့်. သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့လက်ျာဘက်မြို့ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့ပါတယ်…